Xildhibaan C/rashiid Xidig “Taariikhda ayaa xusi doonto wixii maanta Kismaayo loogu geestay taageerayaasheyda” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa ka hadlay is hortaag lagu sameeyay boqolaal tagaarayaashiisa ah oo ku sugnaa Wadooyinka Kismaayo kuwaas oo damacsanaa in ay soo dhoweeyaan asaga iyo wafdigiisa.
Shacabkaan ayaa waxa is hortaagay Ciidamada amaanka ee Maamulka Jubbaland waxaana la sheegay in la jirdilay qaarkoodna la hanjabay sida ay warbaahinta u sheegayn qaar kamid ah oo Kismaayo ka hadlay.
“Mahad gaar ah Waxaan u celinayaa Shacabka reer Jubaland ee maanta u diyaar garoobay soo dhaweyntayda balse laga hor istaagay” ayuu warbaahinta u sheegay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya
“Waan hubaa in ay tahay maalin taariikhi ah oo shacab Caleemo Qoyan wata laga hor istaago soo dhaweynta Murashaxooda Madaxweynaha Jubaland 2019” ayuu yiri Xildhibaan Xiddig oo warbaahinta Kismaayo kula hadlay.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in Ciidamada amaanka aysan wax qalad ah laheyn, waxyaabihii dhacayna ay ahaayeen amar Ciidamada ka sareeyay, asaga oo u cudur daaray Ciidamada Maamulka Jubbaland.
“Waxaan bogaadinayaa ciidamada Amniga ee Jubaland oo si ixtiraam badan ula dhaqmay shacabka anigoo huba in aysan raali ka ahayn sida shacabka loola dhaqmay balse fuliyay amarkii lasiiyay”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdirashiid Xidig.
“Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasheyda gudaha iyo dibada inay u hogaansamaan tilmaamaha hey’adaha Amniga kuna ekaadaan goobahooda” ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
Xidig ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo uu ku eedeeyay in uusan daadajin Dhismaha Gudiga doorashooyinka iyo Xadduudaha ee Maamulka Jubbaland.
“Waxaan ku baaqayaa in la daadajiyo dhismaha Guddiga doorashooyinka iyo Xadduudaha ee Jubbaland, kuwaas oo laf dhabar u ah doorashada Jubbaland ee 2019”, ayuu yiri Cabdirashiid Maxamed Xidig.
Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in uu la wadaagay wixii maanta ka dhacay garoonka Kismaayo Maamulka Jubaland, dowladda federaalka, Urur Goboleedka IGAD,AMISOM Sector 2 oo Kismaayo ka howlgala iyo beesha Caalamka.
Xidig oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa la sheegay inuu ka mid yahay Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Jubbaland doorashada dhici doonta bisha Agosto ee sanadkan.